Basikety – “Workshop”: niofana ny DTN malagasy | NewsMada
Basikety – “Workshop”: niofana ny DTN malagasy
Notanterahina tany Abidjan, Côte d’Ivoire, ny 30 sy ny 31 oktobra lasa teo, ny fiofanana “Morkshop”, taranja basikety, natokana ho an’ireo firenena miisa 14, miteny frantsay: i Alzeria, i Bénin, i Borkina Faso, i Centre Afrique, i Kongo Brazzaville, i Côte d’Ivoire, i Gabon, i Ginea Konakry, i Madagasikara, i Maraoka, i Maoritania, i Niger, i Tchad, i Togo. Anisan’ny nanatrika izany ny tale teknika nasionaly malagasy (DTN), Razafiarivony Angelot, sy ny filoha lefitry ny federasiona, Ramanarivo Alain.
Lohahevitra niofanan’ny DTN ny mahakasika ny andraikiny sy ny asany. Anisan’izany ny fandaharam-potoana voafaritra ho an’ny ekipam-pirenena, ny fametrahana ny departemanta teknika, ny fanomezana fiofanana, ny fandrafetana ny fifaninanam-pirenena ary ny tanjona tian-kotratrarina.
Teo koa ny fanomezam-baovao mahakasika ny fikambanan’ny mpanazatra eran-tany (WABC), ny fomba fangatahana fiofanana, ny eo amin’ny “solidarité olympique”. Voaresaka tamin’ity fiofanana ity koa ny basikety Fiba 33, nentin-dRamaroson Jean Michel, filohan’ny federasiona Malagasy, ka noraisina ho ohatra ny eto Madagasikara. Teo koa ny fampivelarana ity taranja ity ho an’ny besinimaro ary ny hahazoana maka mpilalao “elite”. Nifantoka tamin’ny fifandraisana iraisam-pirenena, sy amin’ireo tomponandraiki-panjakana ary ireo fikambanana ny an’ny filoha lefitry ny federasiona.